ခွေးသား (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ခွေးသား (၁)
- သျှင်ကြီး နိဂိမိ
Posted by သျှင်ကြီး နိဂိမိ on May 22, 2019 in Food, Drink & Recipes |4comments
ခွေးသား ရဲ့ အရသာ
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရသာ ခံစားမှု ကွဲပြားနိုင်ပေမဲ့လည်း ယေဘူယျ အားဖြင့် လူတွေအမြဲတစေ စားသောက်နေကြတဲ့ အမဲသား၊ ကြက်ဝက် အစရှိတာတွေရဲ့ပုံစံနဲ့အရသာက အရမ်းကြီးကွဲပြား ခြားနားတာမျိုး မရှိပေမဲ့ အသား နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အရသာ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြတယ်
ကျစ်လစ်ပြီး ပြည့်ဝတဲ့ အသားမျိုးကို ကြိုက်သူတွေအတွက်က နံရိုးဖက်ပိုင်းတွေက စားကောင်တတ်ပြီးနူးညံ့တဲ့ အရသာနဲ့အဆီများတာကို ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ခွေးဝမ်းဗိုက်သားဟာ အလွန်အမင်းစားကောင်းတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်တယ်
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ခွေးသားကို ပြုတ်ပြီး စားကြပေမဲ့ဝက်သားပြုတ် နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရင် ၀က်သားလိုမျိုးအဆီတွေ အများကြီး မရှိတဲ့ အတွက် အလွန် အရသာရှိတဲ့ အမိုက်စာ အသားတစ်မျိုး ဖြစ်တယ်
ဆိတ်သားပြုတ် နဲ့အနည်းငယ် တူတယ်လို့ပြောလို့ ရပေမဲ့ ခွေးသားပြုတ်ဟာ ပိုမို နူးညံ့ပြီးတော့ အရသာပိုမို ကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုကြတယ်
ခွေးသားကို စားဖို့ အတွက် ချက်ပြုတ်တဲ့ အခါတွေမှာအကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုကတော့ အခြား အသားတွေမှာလိုပဲ ခွေးသားရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အနံ့ ကို ဘယ်လိုမျိုးထိမ်းချုပ်ဖယ်ရှား နိုင်မလဲ ဆိုတာကလည်း ပညာသားပါတဲ့ အရေးကြီး အချက်တချက် ဖြစ်တယ်
ခွေးသားကို ကောင်းမွန်အောင် ချက်ပြုတ်တတ်ကြတဲ့ခွေးသားဆိုင်တွေရဲ့ လက်ရာ အများစုကတော့ အနံ့ လုံးဝ မရှိတော့ပဲ အကောင်းစား အမဲသားကို စားရတဲ့အတိုင်း ဆားကလေး အနည်းငယ် ဖြူးပြီး စားရင်တောင်ရနိုင်တဲ့ အထိ အရသာ ရှိလွန်းလှတယ်
ခွေးသားဟာ အခြားသော အသားတွေထက် ပိုမိုပြီးပျော့ပြောင်း နူးညံ့ အရသာ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေပြန့်နှံ့ လာတယ် ဆိုတာဟာလည်း ကင်စားတာမျိုးတွေကြော်စားတာမျိုးတွေထက် ပြုတ်ပြီးတော့ စားတာမျိုးပေါင်းပြီးတော့ စားတာမျိုးက ပိုပြီး အရသာ ရှိတယ် ဆိုတာ လူတွေ ပိုပြီး သိလာလို့ခွေးသားကို လူတွေရဲ့ အဟာရ မှီဝဲမှု အတွက် စားသုံး လာကြတာ ဖြစ်တယ်
အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလိုပဲ ခွေးသားဟာ ဘယ်နေရာရဲ့ အသားလည်း ဆိုတာကို မူတည်ပြီးတော့ အရသာကအမျိုးမျိုး ကွဲပြားပြီး စားလို့ ကောင်းလွန်းတယ် ဆိုတဲ့အပြောမျိုးတွေ ရှိသလို ခြေထောက်သားကို သီးသန့် ချက်ပြုတ်စားသောက်တာတွေလည်း ရှိတတ်တယ်တချို့ ကတော့ ခွေးရဲ့ ကိုယ်တွင်း ကလီဇာတွေကိုအနံ့ အသက် ကင်းစင်စေတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ ချက်ပြုတ်ကြသလို တချို့ တွေဆိုမျက်လုံးတောင်မှ ပစ်ရက်စရာ မရှိဘူးလို့ ဆိုတယ်ချက်ပြုတ် စားသောက်တတ်မယ် ဆိုရင် အခြားသောဘယ် အသားနဲ့ မှတောင် မလဲနိုင်တဲ့ အထိ အရသာထူးကဲ လွန်းလှတယ်လို့ဆိုကြတယ်
ခွေးသားကို လူတွေ ဘာကြောင့်စား ?
အခြားသော အကြောင်းရင်းတွေထက် ပိုပြီး ရှင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီတိုင်း အရသာ ရှိတဲ့ အတွက်စားကြတယ် ဖြစ်တယ် သာမာန် လူတွေ အများစုဟာခွေးသား စားမိရင်တောင် ဘာ အသားမှန်း မသိကြတာများကြတယ် အလွန်ကို Sensitive ဖြစ်လွန်းတဲ့ လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ လူကို Blind Test လုပ်ပြီး ကျွေးကြည့်တဲ့အခါ ဘာ အသားမှန်း မသိပေမဲ့ ပုံမှန် စားနေကြအသားတွေထက် ပိုမို ကောင်းမွန်ပြီး အရသာရှိတဲ့အတွက် ပုံမှန် စားတာထက်တောင် ပိုမို ပြီးတော့အရသာ ရှိရှိ စားသောက်ကြတယ် ဆိုတဲ့ Resultတွေလည်း အခိုင်အမာ ရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်
Blind Test လုပ်ခံရတဲ့ လူတွေဟာ စားသောက်လို့ ပြီးတဲ့ အခါကျမှ ခွေးသားဆိုတာကို ရှင်းပြလိုက်တော့အလွန်အမင်းကို ထိတ်လန့် သွားတဲ့ လူတွေကို ကြည့်ရင်ခွေးသား မစားဘူး ဆိုတဲ့ လူတွေနဲ့အလားတူစွာပဲဘာအသားမှန်း မသိတဲ့ အချိန်မှာ အားရပါးရ အရသာရှိကြောင်း ဖော်ပြပြီး စားသောက်တတ်ကြတယ်ခွေးသားမှန်း သိလိုက်ရတဲ့ အခါမှသာ အောင်မလေးအဘလေး အော်တတ်ကြတာမျိုး ဖြစ်တယ်
ခွေးသားကို တခါမှ မစားဘူးတဲ့ လူတွေ ဘာအသားဆိုတာကို မသိပဲ စစားကြည့်တဲ့ အခါမှာ သူတို့ တွေရဲ့ မှတ်ချက်က ဆိတ်သငယ်သား ၊ ဆိတ်သား ၊ ဒါမှမဟုတ်အခြား ကွဲပြားတဲ့ အမဲသား အကောင်းစား တခုခုဆိုပြီးထင်မှတ်မိတယ်လို့ဆိုကြတယ် ဒီတိုင်း ပြုတ်ထားတဲ့အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် အနေအထားမျိုးမှာတော့ခွေးသားဆိုတာကို ရိပ်မိနိုင်ပေမဲ့ အပေါ်ယံမှာ ရှိတဲ့အရေခွံကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ အသားတွေကိုတကိုက်စာ အတုံးလေးတွေ တုံးပြီးတော့ အမဲပြုတ်လိုမျိုး ကြက်ပေါင်းလိုမျိုး ချက်ပြုတ်ပြီး ကျွေးမိရင်ခွေးသားမှန်း ဘယ်လိုမှကို မသိနိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုတယ်
About သျှင်ကြီး နိဂိမိ
Banyar Phyu has written3post in this Website..
View all posts by သျှင်ကြီး နိဂိမိ →
Stewed Dog (ခွေးသားစတူ) ချက်နည်း
(မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ ကျွေး ခွေးဟင်းလျှာ)
ဆား လဖက်ရည်ဇွန်း ၆ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ ၁၂မွှာ – တမွှာစီထုထားပါ။
ကြက်သွန်နီ အလုံးကြီး ၂လုံး – ပါးပါးလှီးထားပါ။
1 1/2 cups liver spread — ခွေးအသည်း တတုံး
နာနတ်သီး တလုံး – လက်မ၀က်ခန့်အတုံးများတုံးထားပါ။
ခွေးပျိုမတကောင်ကို သတ်ပါ။ ထင်းမီး-မီးဖို၍ ခွေးမွှေးများလောက်ကျွမ်းကုန်သည်အထိ အကောင်လိုက်ကို မီးတင်ရှို့ပါ။ ပူနေစဉ်အချိန်တွင် ခွေးအရေပြားများကို ခွာထုတ်ပါ။
ခွေးအသားချည်း(ပေါင်သား။ ရင်ပုံသား) ကို လှီးထုတ်ပြီး တလက်မအတုံးများတုံးပါ။
ရှာလကာရည်။ ငရုပ်ကောင်းအမှုန့်ကြိတ်။ ဆားနှင့် ကြက်သွန်ဖြူရော၍ ၂နာရီနှပ်ထားပါ။
အချိန်စေ့လျှင် အသားများကို မီးပြင်းပြင်းနှင့်ဆီပူထိုးပါ။
နီရဲလာလျှင် ကြက်သွန်နီ။ နာနတ်သီးစိတ်များထည့်၍ မွှေပေးပါ..။
ကြက်သွန်နီအနည်းငယ်ပျော့လာလျှင် ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်မျာနှင့်ရေကို လောင်းထည့်ပြီး ကရ‌ဝေးရွက်ငရုပ်သီး‌ခြောက်နှင့် တာဘတ်စကိုးတို့ပါထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်ကာ နှပ်ထားပါလေ..
၁၀မိနစ်ခန့်ကြာလျှင်.. အဖုံးပေါ် မီးသွေးမီးရဲရဲများတင်ကာ အသားများနူးသည်အထိထားပါ။ ( နာရီဝက်ခန့်)
ထို့နောက် ခွေးအသည်းကို ဘရန်ဒါနှင့်ကြိတ်ကာ ‌လောင်းချပြီး.. ‌နောက်ထပ် ၅မိနစ်-၇မိနစ်ထပ်ထားပါ။
(ခွေးသားအစား သိုးသားလည်းပြောင်းထည့် ချက်နိုင်ပါသည်။)
မှတ်ချက် ။ ။ အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှ အပင်ပန်းခံ ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အိမ်မှာ မွေးထားတုန်းလည်း သခင်ကိုသစ္စာစောင့်သိခြင်း၊
အားကိုးရခြင်း၊ ချစ်ခင်စရာကောင်းခြင်း အပြင် သတ်စားပစ်လျှင်လည်း
အရသာရှိသော အ ကောင် ပ လောင် တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ပေါ့လေ…
ဒါနဲ့အသားကို စားတာထိတော့ စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ မ နေ ။
ကိုယ်လည်း ရွာမှာတုန်းက တစ်ခါလား စားဖူးတာကိုး။
ကလီစာ စားတာတော့ စိတ်ထဲ ပျို့တက်မိ။
မချက်တတ်ရင် ညှီမယ့်အပြင်… ချီးစားတဲ့ခွေး ဆိုရင် ပြီးရော….
ဗီယက်နမ်မှာပေါတယ်လေ….ခွေးသားစားရင် ပူတယ်လို့တော့ ပြောသံကြားဖူးတယ်
ခွေးသားမပြောနဲ့ ၀က်သား အမည်းသားမစားတောင် မစားဘူး။